Malunga nathi - Wuxi Songhu Xinrui Machinery Co., Ltd.
Wuxi Songhu Xinrui Machinery Co., Ltd. ekwabizwa ngokuba Wuxi Hang Seng Machinery Co., Ltd. yasekwa ngo-2007 kwaye iye yasekwa iminyaka engaphezu kweshumi. Ngaba imveliso yobungcali, ukuthengisa ezahlukeneyo koomatshini besila, abavelisi isityumzi. Inkampani ibekwe eWuxi, imvelaphi yeshishini lesizwe. Indawo ekuyo le nkampani iphezulu, kufutshane nesikhululo sikaloliwe esinejubane esikhulu saseHuishan, ukuthuthwa okufanelekileyo. Inkampani ibisoloko ithobela.
"kumgangatho wokuqala, umthengi kuqala, inkonzo esemgangathweni, thobela injongo yesivumelwano." Ngegama elihle leemveliso zokulunga okuphezulu, inkonzo ekumgangatho ophezulu, iimveliso zithengisa kakuhle kuwo onke amaphondo, kwizixeko, kwimimandla ezimeleyo kwaye zithunyelwa ngaphandle I-Afrika kunye namanye amazwe, ngentliziyo iphela kunye namashishini asekhaya nakwamanye amazwe aphumelele intsebenziswano.
I-Wuxi Songhu Xinrui Machinery Co., Ltd.
Ububanzi bokusetyenziswa Ifanelekile ngeplastikhi yentsimbi, ibhodi ebambekayo, ukhuni lwendalo, umgca weengile, ucingo lwamatye eplastikhi, iprofayile, udonga, ipayipi, i-XPS, itemplate yokwakha, ibhodi egwebu, i-SPC, umgangatho we-WPC, ithayile yentlaka.
Umthengi kuqala, ejolise ebantwini, iqela leqela lokuqala lodidi, yenza uphawu lwethebhulethi, itekhnoloji yesayensi njengamandla okuqhuba, umgangatho wokusinda.
Umoya wobuchule, ukhuphiswano lobumeli, abathengi kuqala, intsebenziswano yeqela, ishishini kunye nesicwangciso sokuphumelela kwabasebenzi.
Zimasa iBurma Rubber & Plastics Exhibition